သုံးသပ်ချက် Huawei Mediapad M5 Lite 10 LTE + Stylus | Androidsis
Francisco Ruiz | | Huawei, reviews, Android တက်ဘလက်များ
ဤအခါသမယတွင်, သင်တို့ကိုပြီးပြည့်စုံသောဆောင်ခဲ့အပြင် Huawei Mediapad M5 Lite ဗီဒီယိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းApple iPad နှင့်၎င်း၏ Apple Pencil ကိုမနာလိုစရာမရှိသော Android တက်ဘလက်အသစ်၊ ဒီကိရိယာသစ်သည် Androidsis အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်မည်၊ ၎င်းသည်ဗွီဒီယိုအပိုင်းသစ်ကိုတာဝန်ယူလိမ့်မည်။ Android Tablets အတွက်အကောင်းဆုံးလျှောက်လွှာများကိုအပတ်စဉ်တင်ပြပါမည်။
ဒီတော့အခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင်သည် Android Tablet အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေလျှင်သို့မဟုတ်၎င်းသည် Apple Pencil ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတွက် Apple iPad ကိုဝယ်ယူရန်စဉ်းစားနေပါက၊ ဤစက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုကိုဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသင်ကြည့်ရှုရန်အကြံပြုပါသည်။ ဒီ post နဲ့ကျွန်တော်ပူးတွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံကဒီကိုကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအားလုံးကိုအသေးစိတ်ပြသပါမယ် Huawei Mediapad M5 Lite နှင့် M-pen ပါ ၀ င်သည်၎င်း၏အပြည့်စုံဆုံးဗားရှင်းအတွက်အစုံ, Wifi + LTE ကိုဤနေရာတွင် နှိပ်၍ ယူရို ၂၉၃ ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ပိုများသောသူ့ကို M-Pen ကိုဤနေရာတွင်နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၄၆ ယူရိုပိုရနိုင်သည်, ဒီဟာကသင့်ကိုယူရို ၃၃၉ ကျသင့်မှာပါ.
1 Tablet Mediapad M5 Lite 10.1 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Tablet Mediapad M5 Lite 10.1 ၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ
Mediapad M5 Lite 10.1 "
EMUI 8.0 စိတ်ကြိုက်အလွှာပါသော Android 8.0
၁၀.၁ "IPS FullHD နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်နည်းပညာနှင့် 10.1D ပြီးပါက ၂၂၄ dpi နှင့်အတူ
Kirin 659 8 Core4x 2.36 Ghz +4× 1.7 Ghz
dual-core Mali T830
32 Gb အထိ microSD 256 Gb အထိထောက်ပံ့သည်
Full MHD ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည့် 8 mpx 30 fps
ဝိုင်ဖိုင် Fi 802.11a/b/ g / n / ac; ဝိုင်ဖိုင်တိုက်ရိုက်၊ dual-band - Nano SIM - GSM 850/900/1800/1900 (BAH2-L09) - HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 (BAH2-L09) - LTE (BAH2-L09) - GPE (BAH2-) L09) - Bluetooh 4.2 - GPS နှင့် aGPS GLONASS - OTG - OTA
သတ္တုအချောထည် - ရှေ့မျက်နှာပြင်လက်ဗွေဖတ်စက် - စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တက်ကြွစကပ်နှင့်အတူသဟဇာတ - USB Type C 2.0 - အထက်နှင့်အောက်ဘောင်များ၏ထောင့်တွင်ရှိသောစပီကာ ၄ ခုမှ Harman Kardon စတီရီယိုအသံ။
7500 mAh ဘက်ထရီ
243.4 162.2 7.7 မီလီမီတာ
€ 293 Wifi + LTE အမျိုးအစား - € 249 Wifi တစ်ခုတည်းသောမော်ဒယ် - € 46 M-Pen Stylus Lite ။
ပုံတစ်ပုံသည်စကားလုံးတစ်ထောင်လောက်တန်ဖိုးရှိသဖြင့်မကြာခဏပြောလေ့ရှိသဖြင့်ဤစာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်၊ ၎င်းတွင်မိနစ် ၄၂ မိနစ်ထက်မကကျွန်ုပ်သည်အသိစိတ်ဖြင့်သင့်အားစကားပြောသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Tablet Huawei Mediapad M5 Lite နှင့်၎င်း၏ Stylus M-Pen Lite.
ရှာဖွေနေသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ် ကိုယ်တိုင်ရေးခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်းနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျော်စရာပင်လျှင်လာသောအခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်များ Android လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အတူစတိုင်၏အခြားထုတ်ကုန်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာသော Tablet တစ်ခုတွင်ဤအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်။
ထိုအခါငါကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအချက်များနှင့်ပတ်သက်။ ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကဲဖြတ်ထားခဲ့ပါ Huawei Mediapad M5 Lite ၁၀.၁″.
IPS FHD + မျက်နှာပြင်
microSD အထောက်အပံ့သည် 256 Gb အထိရှိသည်
Harman Kardon Stereo အသံ
စပီကာ ၄ ခု
Stylus M-Pen ကိုင်ဆောင်သူ
Full MHD ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနိုင်မှုနှင့်အတူ 8 mpx ရှေ့ဖက်နှင့်နောက်ကင်မရာသည် 30 fps နှုန်းဖြင့်ရှိသည်
USB အမျိုးအစား C
ခေတ်မမီတော့သော Android Security Patch (မတ်လ ၂၀၁၈)
သူတို့ရဲ့ကင်မရာများတွင် Flash ကိုမရှိခြင်း
€249a€349
Huawei Mediapad M5 Lite ၁၀
Wifi + LTE ကိုဝယ်ပါ Stylus M-Pen Lite ကိုဝယ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » သုံးသပ်ချက် Huawei Mediapad M5 ကို Stylus နှင့် တွဲ၍ Lite တွင် iPad ကိုမငြူစူပါနှင့်။ ကောင်းပြီ၊ စျေးနှုန်း!